Kuratidza zvinyorwa neelebheri Kutengeswa kabhodhi
Pepa bhodhi muchina
Pepa muchina kambani EMBA spol. S Ro, Paseky nad Jizerou (akafananidzirwa pamusoro)
Wet chikamu The internet kuturika runoyerera kuti longitudinal kusingaperi waya, ine dewatering pakati pulp zvokuti fibers vari iiswe pamusoro pemvura chidzitiro uye mvura inoyerera kupinda sump. Uyezve, mvura kubva pasi nomusero aspirated mabhokisi Vacuum.
Press chikamu The bepa pepa iri tarisa kubva nesefa uchishandisa vainzwa pachaunga chikamu (vakawanda rwakapetwa yokudhinda mumutsetse), izvo compression inobvisa zvakawanda mvura kubva bepa pepa.
Kudhara chikamu Sezvo hazvichakwanisi kuti mechanical kubvisa mvura yasara mupepa pepa, pepa pepa rinofanira kuomeswa pane zvinyoro-zvakapiswa masilinda. Chishandiso chekucheka (kumusoro saizi kana coating) chinogona kuiswa pakati pechikamu chekuomesa. Panogona kunge paine calender pamagumo emuchina wepepa. Icho chidhindwa chakakosha apo pepa rinogadziriswa. Izvi zvinoteverwa nehure, pane iyo pepa pepa rinokuvadzwa mumitauro kana tafura iyo pepa rakatemwa kuita saizi.
Kuumba kumashizha Kusanganiswa kwesero ...